“Bixitaanka Lionel Messi waxay faa’iido u tahay kooxda Real Madrid” – Toni Kroos – Gool FM
(Madrid) 02 Seb 2020. Xiddiga qadka dhexe kooxda Real Madrid ee Toni Kroos ayaa qirtay in bixitaanka Lionel Messi oo la filayo inuu ka tago Barcelona ay faa’iido u tahay naadigiisa Los Blancos, gaar ahaan tartamada gudaha Spain, sida horyaalka La Liga.
Lionel Messi ayaa kula guuleystay koobab badan kooxda Barcelona, ​​gaar ahaan tartanka Champions League oo 4 jeer ah, iyo horyaalka La Liga oo 10 jeer ah, sidoo kale wuxuu ku guuleystay inuu noqday gooldhaliyaha ugu sarreeya taariikhda kulamada El Clasico, isagoo dhaafay Alfredo Di Stefano.
Toni Kroos ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Haddii qof sidan oo kale ah uusan u sii dheelin kooxda kaa soo horjeedda, waxaad qiyaasi kartaa inaadan la kulmi doonin dhibaatooyin daran marka aan wajahno”.
“Runtii ka bixitaanka Lionel Messi ee kooxda Barcelona waxay faa’iido u tahay Real Madrid”.
”Lionel Messi waa mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican taariikhda kubadda cagta, Shaki kuma jiro in ka tagistiisa Barcelona ay la macno tahay in Barca uu ka maqnaan doono hubkeeda joogta ah”.
Mar wax laga weydiiyay suurtogalnimada uu ku imaan karo Real Madrid, Toni Kroos ayaa sheegay in taasi aysan macquul aheyn, isagoo carabka ku adkeeyay in meesha ugu wanaagsan uu tagayo ay tahay Manchester City, si uu markale ula shaqeeyo Pep Guardiola.
Messi ayaa seegay tababarkii Barcelona usbuucan, sababo la xiriira rabitaankiisa ah inuu uga tago Barca, xilli aabaha dhalay ee Jorge Messi uu ka dagay magaalada Barcelona, ​​si uu ugu diyaar garoobo kulan uu la qaadanayo madaxweynaha Barca ee Josep Maria Bartomeu maanta oo Arbaco ah, si loo go’aamiyo mustaqbalka wiilkiisa.